Tuscaloosa, AL • Fanorana amin'ny vatana sy fanorana NuRu
Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny filanao fanorana Nuru mifaly sy fanosotra vatana any Tuscaloosa, AL.
I Tuscaloosa dia tanàna iray sy toeran'ny County Tuscaloosa any afovoany andrefan'ny Alabama (any atsimo atsinanan'i Etazonia). Any amin'ny ony Black Warrior River any amin'ny faran'ny fianjeran'i Atlantika Seaboard ao Piedmont no tanàna fahadimy ao Alabama. Ny tanàna dia fantatra amin'ny anarana hoe Tuskaloosa hatramin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20. Mikaroha safidy tsara indrindra ho an'ny finaritra mahafinaritra Nuru fanorana filàna ary fikosoham-batana any Tuscaloosa, AL.